Madaxweynaha Somaliland oo markii ugu horreysay ka hadlay Shirka London, Dagaalka Buuhoodle iyo qodobbo kale | Berberanews.com
Home WARARKA Madaxweynaha Somaliland oo markii ugu horreysay ka hadlay Shirka London, Dagaalka Buuhoodle...
Madaxweynaha Somaliland oo markii ugu horreysay ka hadlay Shirka London, Dagaalka Buuhoodle iyo qodobbo kale
Hargeysa-(Berberanews)- Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Md. Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) ayaa caawa daboolka ka qaaday inuu soo gaadhay Somaliland marti-qaadka Shirka Soomaalida loogu qabanayo magaalada London ee dalka Ingiriiska bisha soo socotaka ee sannadkan.
Madaxweyne Axmed-Siilaanyo, waxa kale oo uu sheegay in marti-qaadka ka qaybgalka Shirka London u yaallo Somaliland, isla markaana waxa uu ka hadlay arrimo kale oo la xidhiidha xaaladda siyaasadeed ee wakhtigan Somaliland marayso, dagaalka Buhoodle, natiijada shirkii Taleex iyo qodobbo kale. Waxaanu Madaxweynaha Somaliland sidaa ku sheegay waraysi uu caawa siiyey laanta afka Soomaaliga ee Idaacadda BBC-da. Waxaanu Madaxweynaha oo ugu horreyn ka hadlaya shirka London uu yidhi; “Shirkan Ingiriisku ugu yeedhay inay Somaliland ka soo qeyb gasho marti-qaadkiisii masuuliyiinta Ingiriisku way na soo gaadh siiyeen shirkaa arrintiisa. Somaliland waa dal madax banaan inkasta oo aanu ictiraaf haysan, haddana waa dal madax-banaanidiisa haysta oo sababo taariikheed oo dheer ay keentay madax-banaanidiisa oo dadkuna ay ku tashadeen. Inkasta oo aanay ictiraaf haysan Somaliland haddana dunidu way la shaqeysaa iyana way la macaamishaa dunidda,”ayuu yidhi Madaxweynaha Somaliland.
Madaxweyne Axmed Siilaanyo wuxuu sheegay inaanay xukuumad ahaan ay ka fogaanayso wixii wax u dhimaya madax banaanida Somaliland, isagoo arrintaasi ka hadlayayna wuxuu yidhi “Anagu wixii aanu u aragno inay waxyeelayaan madax-banaanida Somaliland dacan kuma jirno. Shirkan talladiisii iyo arrimihiisii ayaanu ku jirnaa oo waxaanu ka tashanaynaa wixii laga yeeli lahaa. Waxaanu la tashanaynaa qeybo badan oo bulshada ka tirsan oo ay axsaabta siyaasaddu ka mid tahay.”
“Dagaalka ka dhacay Buuhoodle waa ayaan darro oo aad iyo aad ayaanu uga xun nahay dagaal aanu shacbi ku qaadnay ma aha, waxa jiray dagaal ciidamo hubaysan oo dadka khalkhal gelinayay ay ciidamaddu tallaabo ka qaadeen. Waanu ka xunahay haddii dad shacab ah dhibaato soo gaadhay ma rabno kumana tallo jirno inaanu dad shicib ah waxyeelo.” Sidaa ayuu yidhi Madaxweynaha Somaliland.
Madaxweyne Axmed Siilaanyo oo la weydiiyay sida uu u arko natiijadii shirkii Taleex lagu soo gabo-gabeeyay dhawaan waxaanu yidhi “Arrimaha ka soo baxay shirkaasi ee dhibaatooyinka kicinaya,marka hore beeluhu way shiri jireen oo deegaanada dalka waynu ka war-qabnaayoo beelo badan ayaa shirayay laakiin waxay u shirayeen danahooda iyo deegaanadooda in wixii horumar ah ee dhinacyada Tacliinta,biyaha iyo caafimaadka. Shirkaasi markiisii hore manaan diidin waayo lanoogama dhigin shir goosi la imanaya, waanuse ka dignay oo waxaanu nidhi inta shirkaasi yahay mid dadku aayihiisa kaga tashanayo waxba kama qabno madax banaanida Somaliland-na way wada saxeexeen beelaha Somaliland shirkii Burco ee 1991-kii.
Dhinaca kale, waraysi kale oo uu madaxweynaha Somaliland Md. Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) siiyay BBC World Service, ayuu si qoto-dheer ugaga waramay marxaladihii kala duwanaa ee ay Somaliland soo martay ee dhinacyadii dib u heshiisiintii beelaha, dhismihii Ha’yadaha dawliga ah, hirgelinta dimuqraadiyada iyo tartanka axsaabta badan iyo qodobo kale.
Madaxweynuhu waxa uu sheegay inay xukuumadiisu dedaal ugu jirto sidii ay shaqooyin ugu abuuri lahayd Muwaadiniinta iyo dhalinyarada dalka, waxaanu tafaasiil ka bixiyay go’aankii uu sanadkii hore mushaharkii ugu kordhiyay 100% ciidammadda iyo shaqaalaha dawladda.
Previous articleTacsi: Jaaliyadda Somaliland ee Germany
Next articleWasiirka Gaashaadhigga Somaliland oo dhagax-dhigay mashaariic hor leh oo laga bilaabayo Sanaag